Shiinaha Soo Laabanaya Soosaarayaasha Plywood-ga ah iyo Badeecad | Roc
Guddigan layaabka leh ee rogrogmi kara wuxuu u qaabeyn doonaa ku dhowaad dherer kasta oo qaloocan. Awoodda ay ugu leexan karto jihooyinka dhaadheer ee hadhuudhka ama iskutallaabta iskutallaabta ayaa ka dhigaysa guddi isku dhafan oo loogu talagalay naqshadaha isku dhafan.
Goobta shaqada, ROCPLEX foorarsiga plywood-ka waxaa lagu dabooli karaa noocyo kala duwan oo laminates ah ama veneers warqad lagu taageeray muuqaalkii dhammeeyay ee aad u baahnayd. Waa xalka ugu fiican ee tiirarka qalooca, arches, armaajooyinka iyo alaabta guriga ama meheradaha ganacsi a meelkasta oo looga baxo dhinac qumman ayaa la doonayaa.
ROCPLEX qalooca plywood
3 ply construction: Rotary diiray wajiga adag ee adag iyo dhabarka. Waji khafiif ah.
5 ply construction: Rotary diiray wajiga adag ee adag iyo dhabarka. Dahaarka khafiifka ah ee gudaha.
Dhumucdiisuna: 1/8 ″, 1/4 ″, 3/8 ″, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm ama nala soo xiriir si aad u hesho cabbirro kale.
Qiyaasta Gudiga: 4 'x 8' Badar dheer ama 8 'x 4' Badarka iskutallaabta.
Raadiyaha ugu yar: 12 ″ Waxaa suura gal ah inuu rogrogo waxyar, laakiin wuxuu u baahan doonaa xoog weyn. Dhammaan qaybaha ka kooban qaybaha waa inay ahaadaan kuwo "sifeynaya" gacanta si loo gaaro dabacsanaanta ugu badan.
Sanding: Guddiyadu waxay u baahan karaan sanding site.
Araajida: U adeegso codsiyada qalooca oo lagu dabooli doono laminate-ka, jaakadaha waraaqaha lagu taageeray ama dusha sare ee kale. Guddiyada looma qorsheynin qaab dhismeed ama dibadeed.
Formaldehyde-free: Waxaa lagu sameeyay tiknoolajiyad PureBond oo soy ku saleysan.
ROCPLEX foorarsiga plywood waa guddi isku dhafan oo loogu talagalay codsiyo badan oo naqshadeyn ah oo khadadka toosan aysan sameyn doonin. Dabacsanaanta layaabka leh ee ROCPLEX panel waxay ka dhigeysaa xal weyn:
Naqshadaha wareega ee wareega
Golayaal wareegsan oo qalooca ama jasiirado
Qaabilaada iyo xarumaha shaqada ee xafiiska
Meelaha iyo sanduuqyada qaansorooyinka
Cutubyada gidaarka wareega iyo tiirarka
8 × 4 ′ foosto foosto foosto foorari
4 × 8 ′ xargo dhaadheer oo hadhuudh ah
Dharka muhiimka ah Dhar khafiif ah
ROCPLEX Laabista Faa'iidada Plywood
* Xoog foorarsi sare iyo ciddiyo xoog leh oo qabata.
* Iyadoo aan la kala qaadin oo la dillaacin, tayada joogtada ah.
* Uumiga oo aan cadeyn iyo dhismo adag. Ma jiirmay ama xumaaday.
* Sii deynta formaldehyde ee hooseeya
* Way fududahay ciddiyaha, wuxuu arkay goynta iyo qodista. dhagaxyada u gooyn karaa qaabab kala duwan iyadoo loo eegayo baahida dhismaha.
* Plywood-ka waxaa laga farsameeyay alwaax dhab ah.
Hore: Filinka Rocplex Antislip Oo Plywood Ku Wajahan
Xiga: Plywood Ganacsi